यौनआनन्द पाउने उपायहरूमध्ये यौन अङ्गको घर्षण नै प्रमुख हो,किन ? – Tungoon
होमपेज » मुख्य समाचार » राेचक » समाचार
यौनआनन्द पाउने उपायहरूमध्ये यौन अङ्गको घर्षण नै प्रमुख हो,किन ?
यौनआनन्द पाउने उपायहरूमध्ये यौन अङ्गको घर्षण नै प्रमुख हो । यौनसम्पर्कमा यौनाङ्गहरू नै एक९आपसमा घर्षण गराइन्छ । यस्तो घर्षण अरू कसैको यौन अङ्गमा गराउँदा मात्र होइन, हातले गराउँदा पनि आनन्द आउँछ। सिद्वान्ततः यौनसम्पर्क गर्दा र हस्तमैथुन गर्दा यौन आनन्द पाउने प्रक्रिया उस्तै हो । त्यसैले सम्भोग गर्दा हानि नहुने र हस्तमैथुन गर्दा हानि हुने कुरा भन्न मिलेन ।
कतिपय गलत धारणा वा भ्रमहरू व्याप्त भए पनि हस्तमैथुनले स्वास्थ्यसम्बन्धी हानि९नोक्सानी गर्दैन । हस्तमैथुनले यौनइच्छाको दमनबाट हुने तनावबाट मुक्ति दिलाउँछ ।रमाइलो वा प्रेमको मुड बनाउन खानाको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । प्राचीनकालदेखि नै युवायुवतीले यौन उत्तेजना बढाउने खालका विशेष खानेकुरा खान्थे । बेरी, फिग्स, महले यौन शक्ति बढाउने भन्दै यसको कम उपभोग गरेको बताइन्छ । यौन उत्तेजना गराउने दश ओटा उत्तेजक खानेकुरा यसप्रकार छन् ।
आफ्नो यौन क्षमता बढाउन मध्यकालमा मानिसहरुले मह पिउने गर्थे । प्राचीन समयमा कुनै पनि बिबाहित जोडिलाई बिबाह गरेको एक वर्षसम्म महबाट बनेको पेय पदार्थ नियमित रुपमा खुवाइन्थ्यो, ताकी उनीहरुको हनिमुन रमाइलो होस् र बिबाह सफल होस् ।
महमा भिटामिन बी पाइन्छ । पुरुषमा टेस्टोरोन ९सेक्स हर्मन० उत्पादन गर्न भिटामिन बीको आवश्यकता पर्छ । महले रगतको तहलाई पनि सशक्त बनाउँछ ।
भर्खरै बिरामी भएर निको भएका व्यक्तिको तग्रिन पनि यसले सहयोग प्रदान गर्छ । अदुवालाई तातो पानीमा उमाल्नुहोस, केही कागती र मह मिसाएर बनाएर खानुहोस् । यसले तपाईलाई सदा स्फूर्ती प्रदान गर्छ ।
दक्षिण पश्चिम युरोपमा पाइने ट्रफल ९एक प्रकारको फन्जी० यौन उत्तेजनाको दृष्टिले महत्वपूर्ण खानेकुरा मानिन्छ । प्राचीन ग्रीस र रोममा यसको अत्यधिक प्रयोग हुन्थ्यो । यसलाई आफ्नो पार्टनरसँग रमाइलो साँझ जस्ता विशेष अवसरमा आफ्ना पार्टनरसँग बसेर खान सकिन्छ ।
ट्रफलले बासना पुरुषको पसिना जस्तो हुने र महिलाहरुलाई पनि आर्कर्षित गर्ने बताइन्छ । ऐतिहासिक पुरुष नेपोलियन बोनापार्टले ट्रफल खाँदा यौन शक्ति बढ्ने विश्वास गर्थे ।
अन्जिर वा फिग्सलाई यौन र अपराधसँग सम्बन्धित एउटा कुख्यात खाना हो । एडम र इभको बाइबल कथामा उनीहरुको नांगो शरिर ढाक्न अन्जिरको पातहरुलाई प्रयोग गरी अन्जिरलाई सेक्ससँग पर्याबाची गराइएको छ । गार्डेन अफ इभमा भगवानले प्रतिबन्ध लगाइएको खानेकुरा अन्जिर थिए जसको भाव प्रलोभन र अपराध हुन्छ ।अन्जिरको आकार मानिसहरुका लागि उत्तेजक अर्थ राख्छ र यसको बिउ पुरुष उर्वरताको रुपमा लिइन्छ । सेक्सपियरकी पात्र तथा सुन्दरताकी प्रतिमूर्ती क्लियोपेट्राको मन पर्ने फल पनि अन्जिर थियो । प्राचीन ग्रीसमा अन्जिरलाई प्रेमको प्रतिक पनि मानिन्छ । फिगभित्रको चिजलाई महिलाको यौन अंग जस्तै भएको विश्वास गरिन्छ । पिगमा एन्टिअक्सिडियन्ट, फ्लाभोनोइड्स, फाइबर, पोटासियम र आइरन पाइन्छ । यसले मुटु र रक्त कोषिकाको कामलाई पनि सहयोग गर्छ ।
यौन सम्पर्क गरिसकेपछि स्वस्थ रहन जान्नैपर्ने कुराहरु
यौन सम्पर्क पछि महिलाहरुले के सोच्छन् ?
दर्शको मन बस्दै टेलिचलचित्र बेहुली, भाग –१४ सार्वजनिक
दर्शकको मन जित्दै बेहुली टेलिचलचित्र, भाग –१० सार्वजनिक